बेलायत नेपाल प्रज्ञा परिषदको अध्यक्षमा डा. अधिकारी | Nagarik News - Nepal Republic Media
९ माघ २०७७ शुक्रबार
लन्डन-बेलायत नेपाल प्रज्ञा परिषदको अध्यक्षमा डा. कृष्ण अधिकारी निर्वाचित भएका छन्। आगामी ४ बर्षको लागि अधिकारीको नेतृत्वमा तीन जना मुख्य कार्यकारी पदाधिकारीहरूको निर्विरोध चयन भए । मंगलवार सम्पन्न निर्वाचनमा महासचिवमा लण्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सकी डा. पुनम यादव र कोषाध्याक्षमा बर्मिङ्घममा विश्वविद्यालयका डा. फ्रेजर सग्देन निर्वाचित भएका छन्।
प्रकाशित: ७ वैशाख २०७५ १४:३८ शुक्रबार